करिब ३ महिनाको अन्तरालमा दौंतरीमा हामीले १०० पटक बिचार राखिसकेछौं। यस बिचमा मेरो पोष्टले १००औं हुने मौका पाएछ। हुन त १००औ दिन आउन जनवरी १४ कुर्नै पर्दछ तर पनि हाम्रो काम र सफलतालाइ यस्तै अन्य कुराहरुले पनि अगाडी बढ्न बल पुर्याउदछ। लेख्ने दौंतरी र पढ्ने दौंतरीहरुको उलेख्य उपस्थतीले हामी सफलता तिर बढ्दैछौ भन्ने देखाउछ तर यो कुरा नाप्न कठीन हुने हुंदा के लाइ सफलता भन्ने , त्यो चाही पक्कै गार्हो कुरा हो। गफै गफमा स्वफुर्त रुपमा निस्कीएका बिचारलाइ समेटेर दौंतरीमा बाधिएका हौ। यसरी निस्किएका बिचार लेख्दा, पढ्दा कहिले काहीं छरपष्ट पनि हुन सक्छन तर छरपष्ट बिचारलाइ समाहलेर अघी बढ्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो। चारै तिरबाट यथेष्ट सहयोग त पाएकै छौं, यसरी सहयोग पाहिरहे दौंतारीले पक्कै पनि सगरमाथाको चुचुरोमा छुने छ।
सामुहिक दुधपोखरी निर्माण गर्दा एक छिमेकीले अर्को छिमेकीको आश गरी रित्तै पोखरीमा जादा उद्घघाटनको समयमा एक थोपा पनि दुध नभएको कथा त हामीले सुनेकै हौं। सामुहीक दौंतारीमा भने हामी सबै मिलेर दुधै दुध भएको पोखरी बनाउने छौ भन्ने आशा लिएको छु।
We must congratulate you for your golden jubilee postings. And I am really impressed of your "100m race" speed.You are truely the one to carry on this blog.Keep it up.
धन्यबाद छ ब्रिलियन्ट जि। दौडने त हामी सबै हौं नी पालै पालो रिलेमा जस्तो। तर यो रिलेमा १००औ मा मेरो पालो परेछ। अब पुरस्कार सबैले बाडेर लिनुपर्छ।
१००औ दिन ( जनवरी १४) को लागी धुम धाम तयारी गर्नुपर्छ है।